Ungaluthola kanjani okuningi ukulandela ama-backlink kuwebhusayithi yakho?
Uma nje usungula ibhizinisi lakho ku-intanethi, ufuna ukuthola izikhundla eziphezulu eziphezulu emiphumeleni yosesho. Nokho, kufanele uqaphele ukuthi akunakwenzeka ukuba uthole isikhundla esiphakeme ebusuku. Kufanele wakhe umkhankaso wokwakha wokuxhumanisa oqinile ngaphambi kokuba uqale ukubuka imiphumela yokuqala yemisebenzi yakho.
Wonke umuntu uyazi ukuthi izixhumanisi zingazuzwa ngezindlela ezahlukene. Amanye ama-backlink angakwazi ukuletha isayithi lakho elithile, kanti amanye angalimaza indawo yakho yesayithi futhi ashise idumela lakho lomkhiqizo. Zonke izixhumanisi zihlukaniswe zibe yi-dofollow ne-nof elandelayo. Kulesi sihloko, ngizohlanganisa yonke le mibono bese ngichaza ukuthi ingayithinta kanjani imisebenzi yakho ye-SEO.
Lolu hlobo lwe-backlink lubhekisela kumfanelo we-HTML esetshenziselwa ukuvumela i-bots search ukulandela izixhumanisi. Uma othile enquma ukulandela isizinda sakho ngokusebenzisa isixhumanisi se-dofollow, search bots, kanye nabasebenzisi abajwayelekile, uzothola ithuba lokulandela isayithi lakho. Isixhumanisi esilandelayo sidlula ku-juice yokuxhumanisa futhi siletha ithrafikhi ehlosiwe kuwebhusayithi yakho ekuthuthukiseni isikhundla sakho sendawo ku-SERP.
Izinjini zokusesha ziqaphela izixhumanisi ezilandelayo futhi zihlole ukuthi bangaki abasebenzisi abaxhumanisa nekhasi lakho ukuze baqonde ukuthi isayithi lakho eligunyaziwe. Ikhwalithi engaphezulu elandela emuva isixhumanisi sakho esitholile, iphuzu elingaphezulu kusuka ku-Google ozothola.
Indlela ecacile kunazo zonke yokuthola izixhumanisi ezilandelayo zisebenzisa igama elifanele lokusesha njengombhalo we-anchor. Kodwa-ke, kufanele ukhethe ngokucophelela imithombo yewebhu lapho uthola khona ama-backlink. Kufanele bahlonipheke, banethembeke kakhulu futhi banokwegunya. Ngaphezu kwalokho, kufanele uhlanganyele kuphela nemithombo ehlobene niche yakho yemakethe. Isibonelo, uma uthola i-backlink eyodwa emithonjeni enjengeForbes, Entrepreneur, eNew York Times izokuletha inani elikhulu nokuthandwa kunama-backlink amakhulu ezinkulungwane ezingcolile. Ngakho, izixhumanisi ezilandelwayo ezivela emithonjeni yegunya ewebhu zikhonza njengamavoti wangempela wokuthembeka nge-Google.
Indlela eyinhloko yokuthola izinga elilandela ukulandelana kwe-backlink ngokuthumela okuqukethwe okuhle kwe-intanethi. Uma ngabe iwebhusayithi yakho inikeza abasebenzisi okuqukethwe okufanele futhi okubandakanya okunenani lokufundisa, eminye imithombo yewebhu izoyibona njengolwazi olubalulekile futhi ihlanganyele ngokuzithandela nabanye ngokuzithandela. Kuyindlela ephilayo yokuthola ijusi yokuxhumanisa ephilayo kwisayithi lakho. Inkinga kuphela ongase ubhekane nayo emkhankasweni wakho wokwakha isixhumanisi wemvelo ukuthi kuzothatha isikhathi lapho amakhasi akho ewebhu azoqala nge-low page ranking.
Nokho, kunezindlela ezithile zokusheshisa le nqubo. Ungakhuthaza ukulandela ukulandelela emuva kusizinda sakho ngokumema amanye amawebhusayithi ukubeka i-backlink elandelayo ekuqukethwe kwakho. Kufanele wenze ukudala i-backlink kusayithi lakho njengokulula ngangokunokwenzeka. Isibonelo, ungakha isimemo sokuxhumanisa nokuqukethwe kwakho nekheli le-URL yekhasi lakho lewebhu Source .